Magaalooyinka uu maro Webiga Shabeelle oo biyo la’aan baahsan ay ka jirto – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
15th March 2016 MAREEG Af Soomaali 0
Maamulka Baledweyn ayaa sheegay in biyo la’aanta Wabiga Shabeelle ay saameysay shacabka degmada iyo wax soo saarka dallaga beeraha
iyada oo hoos u dhacay biyaha Wabiga Shabeelle, ayaa haddana, waxa ay biyo la’aantaasi saameysay nolosha Dadka ku nool magaalooyinka uu maro Webiga oo ay ka mid tahay magaalada Baledweyn.
Duqa magaalada Beledweyne Cumar Aadan Deeqoow, ayaa sheegay in biyo la’aanta Webiga ay saameynta ugu weyn ku yeelatay wax soo saarka dallaga beeraha, isaga xusay in Biyaha hadda ku jira Wabiga aysan u wanaagsaneyn Caafimaadka Bulshada, taasi oo sababi karta inay ka dhashaan cudurro.
Duqa Magaalada Baledweyn Cumar Aadan Deeqoow, oo dhinaca kale ka hadlay dhinaca dib u dhiska, ayaa sheegay in hadda magaalada ay ka soconayaan dhismaha Waddooyinkii ku burburay colaadihii sokeeye ee ka dhacay Dalka.
Maamulka degmada oo kaashanaya Hay’adaha samafalka ayaa wado dadaalo biyo dhaamin loogu sameynayo Dadka ay saameysay biyo l’aanta Webiga Shabeelle, iyada hadda Dadka biyaha ay u doontaan meel qiyaastii 5 KM ka baxsan magaalada, maadaama biyaha Webiga uu yahay mid wasaqeysan.